Finoana fa tsy tahotra - fanisam-bahoaka
-nataon'i Mark Mallett of Ilay Teny Ankehitriny
ONE ny fifaliana lehibe ho antsika toy ny mpandray anjara ny Countdown to the Kingdom dia ny famakiana taratasy avy amin'ny pretra, moanina, renim-pianakaviana ambony ary olona laika tsy tambo isaina manerantany manaporofo ny vokatry ny Fanahy Masina nateraky ny famakiana ireo hafatra avy any an-danitra (voalaza). Miara-mifaly aminao tokoa izahay, miaraka amin'ny fiovam-po mitranga ao am-ponao, ny fianakavianao sy ny paroasinao. Ny sasany amin'izy ireo dia manaitra tokoa! Ary eny, zava-dehibe ireo voankazo ireo.
Ny Eveka Stanley Ott, Baton Rouge, LA izay efa nodimandry, dia nanontany an'i St. John Paul II hoe:
“Ray masina ô, ahoana ny hevitrao momba an'i Medjugorje?” Nihinana ny lasopy nomeny hatrany ny Ray Masina ary namaly hoe: “Medjugorje? Medjugorje? Medjugorje? Zavatra tsara ihany no mitranga ao Medjugorje. Mivavaka ny olona any. Handeha hibaboka heloka ny olona. Mankasitraka ny Eokaristia ny olona, ​​ary mitodika any amin'Andriamanitra ny olona. Ary zavatra tsara ihany no toa mitranga ao Medjugorje. ” -notantarain'i Arseveka Harry J. Flynn, medjugorje.ws
Nampianatra i Jesosy:
Ny hazo tsara tsy mety mamoa voa ratsy, ary ny hazo ratsy tsy mamoa voa tsara. (Matio 7: 18)
Ankehitriny, naheno olona tsy mino aho ary nahagaga fa na ny mpiala tsiny amin'ny asa sasany aza manao hoe: “Ah, nefa i satana koa afaka mamoa voa tsara!” Izy ireo dia miorina amin'ny fananaran'i St. Paul:
… Ny olona toy izany dia apôstôly sandoka, mpiasa mamitaka, izay miseho ho apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany, fa i satana aza dia miseho ho toy ny anjelin'ny mazava. Ka tsy mahagaga raha ny minisiterany koa dia miseho ho minisitry ny fahamarinana. Ny fiafaran'izy ireo dia hifanaraka amin'ny asany. (2 Kor 11: 13-15)
Raha ny marina dia i St. Paul no mifanohitra ny fifamalian'izy ireo noho ny filazany anao dia fantaro amin'ny voany izy: “Ny hiafaran'izy ireo dia hitovy amin'ny asany.” Eny, i Satana dia afaka miasa "famantarana sy fahagagana" mandainga hahazoana antoka fa azo antoka izany. Saingy voankazo tsara? Tsia. Hivoaka ireo kankana amin'ny farany.
Raha ny marina dia i Jesosy mihitsy no nanondro ny vokatry ny iraka nampanaovina azy porofo ny fahamarinany:
Mandehana, lazao amin'i Jaona izao hitanao sy renao izao: Mahiratra ny jamba, mandeha ny mandringa, diovina ny boka, mandre ny marenina, atsangana ny maty, ary ny malahelo dia itoriana ny vaovao tsara aminy. Ary sambatra izay tsy manafintohina ahy. (Lioka 7: 22-23)
Nahoana i Jesosy no hanome antsika io fitsapana ny voankazo io raha tsy afaka miankina aminy isika? Mifanohitra amin'izany no izy, ny fiangonana masina ho an'ny fotopampianaran'ny finoana dia mandà io fiheveran-diso io fa rehefa mitsara ny fanambarana ara-paminaniana dia tsy misy ifandraisany ireo voankazo ireo. Fa kosa, manondro manokana ny maha-zava-dehibe izany fisehoan-javatra izany…
… Mamoa voa izay ahafahan'ny Fiangonana miharihary taty aoriana ny tena zava-misy… - "Fomba fanao momba ny fombam-pizarana amin'ny fahalalàna ny fisehoana na fanambarana" n. 2, vatican.va
… Fa ao koa ny tahotra
Izany rehetra izany dia nilaza fa mahafantatra olona sasany matahotra ny zavatra novakiany avy tao amin'ny mpahita sasany ihany koa isika. Ny olon-kafa dia mifantoka be amin'ilay manaitra. Ohatra, ny pretra iray dia nilaza tamiko fa mahalala olona mividy tany izy mba hananganana "fialofana" any. Ny sasany manahy ny amin'ny sakafo tokony hotehiriziny (mpahita telo farafaharatsiny eto,	Gisella Cardia	an'i Italia,	Fr. Michel Rodrigue	an'i Kanada, ary	Jennifer	an'i Amerika dia voalaza fa nomena hafatra mandrisika ny mpino hitahiry sakafo, rano ary kojakoja vitsivitsy). Ary farany, ny hafa dia efa nitazona ny sain'ny ady, ny "Fampitandremana" ary ilay antsoina hoe "Telo Andro aizina", sns.
Hiresaka vetivety amin'ny sasany amin'izany aho ao anatin'ny fotoana fohy satria zava-dehibe ny fitazanan'ny mpino fomba fijery mahasalama. Mazava ho azy fa ny vondron'ireo hafatra dia efa manome an'io fifandanjana io saingy fantatsika fa ny olona sasany dia tsy mandre afa-tsy resaka henatra, fifosana, na tsy mandray am-pitandremana ny vatany manontolo amin'ny hafatry ny mpahita ary, noho izany, ny sehatra lehibe kokoa.
Ny olana dia misy banga ny fahendrena raha ny fanampiana ny mahatoky hahalala. Iray amin'ireo krizy marobe ao amin'ny fiangonana ankehitriny ny tsy fahampian'ny fitarihana sy fanampiana avy amin'ireo mpiandry faminaniana- izay nosoratan'i Md Paul ho iray amin'ny fanomezana lehibe indrindra ao amin'ny fiangonana akaikin'ny Apôstôly ihany.(1) Nahoana ary no tsy misy ny tsy fahampian'ny fampianarana momba an'io fanomezana io fa na dia ny fanamavoana azy aza (1 Tes 5:19) eo amin'ny klerjy sasany? Betsaka ny antony anaovako ny sasany alefako Fahamarinana, ary fahafatesan'ny mistery. Andao indray hodinihintsika izao ny tenin'ny katesizy momba an'io lohahevitra io, izay manazava fa, na dia efa nanambara izay rehetra ilaina amin'ny famonjena antsika Andriamanitra, dia tsy voatery ho nanambara izay rehetra takiana amin'ny fanamasinana.
Na dia efa feno aza ny Apokalipsy dia mbola tsy natao mazava tsara; mijanona ho an'ny finoana kristiana tsikelikely ny fahazoana ny dikany feno mandritra ny taonjato maro. Nandritra ny vanim-potoana rehetra dia nisy ny fanambarana antsoina hoe "manokana", ny sasany dia neken'ny fahefan'ny Fiangonana. Tsy tafiditra ao anatin'ny fametrahana ny finoana anefa izy ireo. Tsy anjaran'izy ireo ny manatsara na mamita ny fanambarana voafaritr'i Kristy, fa ny manampy amin'ny fiainana feno kokoa amin'izany ao anatin'ny vanim-potoana iray amin'ny tantara. Notarihin'ny Magisterium of the Church, ny sensus fidelium ("Fahatsapana ny mahatoky") mahay manavaka sy mandray ao amin'ireo fanambarana ireo na inona na inona fiantsoana marina an'i Kristy na ireo olomasiny mankany am-piangonana. -Katesizan'ny Fiangonana Katolika, nos. 66-67
Ao no anaovanao azy amin'ny teny fohy: Andriamanitra mbola miteny; Manome faminaniana izy hanampy antsika velona avy amin'ny Fanambaran'i Kristy; ary (antenaina) tarihin'ny Magisterium, vitantsika izany hamantatra inona no tena izy ary inona no tsy. Amin'ny fomba hafa:
Aza mamono ny Fanahy. Aza manao tsinontsinona ny teny faminaniana. Andramo ny zava-drehetra; tazomy izay tsara. (1 Tes 5: 19-21)
Ny hevi-dehibe amin'izany rehetra izany dia ny fahazoana ireo fitaovana hahafantarana "izay hatao" amin'ireo faminaniana manaitra kokoa. Amin'ny maha-mpandray anjara an'ity tranonkala ity dia tsy anjarantsika ny mamoaka ny "zavatra mampatahotra", ny manempotra an'Andriamanitra satria manafintohina ny fahatsapan'ny sasany izany. Fa misy lahatsoratra toa an'ity iray ity eto hanohana anao. Fa ...
Ny mpaminany dia olona milaza ny marina amin'ny tanjaky ny fifandraisany amin'Andriamanitra - ny fahamarinana ho an'ny anio, izay koa, mazava ho azy, manome fanazavana ny amin'ny ho avy. —Kardinaly Joseph Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), Faminaniana kristiana, lovantsofina taorian'ny Baiboly, Niels Christian Hvidt, Teny fampidirana, p. vii
Mandritra izany fotoana izany dia tsy maintsy ekentsika fa Andriamanitra-izay-fitiavana dia tsy mampitandrina ny zanany mba hampihorohoroana azy ireo fa hiantso azy ireo hiova fo tokoa.
Amin'izay fotoana izay dia tokony hotadidina ao an-tsaina fa ny faminaniana amin'ny hevitry ny Baiboly dia tsy midika hoe maminavina ny ho avy fa manazava ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, ary noho izany dia asehoy ny lalana tokony hizorana amin'ny ho avy… manampy antsika mahatakatra ny famantarana ny fotoana ary mamaly azy ireo amin'ny finoana. —Cardinal Ratzinger (POPE BENEDICT XVI), “Hafatr'i Fatima”, Fanamarihana teolojika, www.vatican.va
Ka ahoana no tokony hamaliantsika "amin'ny finoana marina" ireo faminaniana ireo izay mampiahiahy ny olona sasany?
Fanontaniana azo ampiharina
Niaiky aho, somary gaga foana aho rehefa maheno ny Katolika tezitra fa “sahy” maminany zavatra toy ny loza ireny ny mpahita sy mpahita. Raha tokony tsy tokony ho tezitra isika fa izao tontolo izao, izay lavitra ny fibebahana, dia manohy manala zaza mandritra ny 115,000 isan'andro, mampianatra ny ankizy ny "hatsaram-panahy" amin'ny sodomia sy ny filokana, dia mirotsaka amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko sy sary vetaveta ataon'ny ankizy. , manafika ny fanambadiana sy ny fahalalahana miteny ary amin'ny fivavahana ve, manohana ny tropista Marxista ary miditra an-tsokosoko voalohany amin'ny Kominisma manerantany? Tsia, toa ny faminaniana momba ny fanangonana sakafo kely na Mpitsoa-ponenana sy fitonenana ho avy manana olona sasany anaty fatotra. Ka ndao hiresaka izany ara-dalàna satria, tsoriko, ny olona sasany tsy malina.
Ary ny mpitsoa-ponenana? Araka ny Soratra Masina, Rain'ny Eglizy ary mpahita maneran-tany, Andriamanitra dia hanome toerana fialofana sy fiarovana amin'ny fotoana sasany (jereo Ny fialofana amin'izao androntsika izao). Fa lazao ahy ry rahalahiko malala, aiza? Lazao amiko rahavavy, rahoviana? Tsy hainay. Ka maninona ny olona sasany no mividy mividy tany ary milaza fa io no ho "fialofan'izy ireo" dia mahagaga raha tsy sahisahy ratsy. Raha mihazakazaka mankamin'ny fifanolanana eran-tany sy ny fanenjehana marobe ny Fiangonana isika, aiza no "azo antoka"? Terry Law, kristiana evanjelika dia nilaza hoe: "Ny toerana azo antoka indrindra dia ny sitrapon'Andriamanitra." Eny, amena izany. Ny Sitrapon'Andriamanitra is fialofana ho antsika.
Ny fialofana aloha dia ianao. Alohan'ny maha-toerana azy dia olona iray, olona miaina miaraka amin'ny Fanahy Masina, amin'ny toetran'ny fahasoavana. Ny fialofana dia manomboka amin'ny olona nanolo-tena ny fanahiny, ny vatany, ny toetrany, ny fitondran-tenany, araka ny Tenin'ny Tompo, ny fampianaran'ny Fiangonana ary ny lalàn'ny Didy Folo. -Fr. Michel Rodrigue, mpanorina ary ambony jeneraly an'ny Ny firahalahiana apôstôlikan'i Saint Benedict Joseph Labre (naorina tamin'ny 2012); “Fotoanan'ny mpitsoa-ponenana”
Ankoatra izany, tsy misy amintsika mahalala zavatra hafa. Mety hiantso anao hody Andriamanitra anio hariva. Na mety ho voatery hifindra monina any an-tany hafa ianao nefa tsy misy afa-tsy ilay akanjo ao an-damosinao. Na mety mila miafina ianao indray andro any anaty ala, nefa ilay "fialofana" mahafinaritra nataonao ho anao dia norobaina. Ka eny, eto no misy ny fitsangantsanganana taloha nataon'ny pretranay izay hamaky ireo famakiana lamesa apokaliptika ireo: mbola tokony hiomana amin'ny "fotoanan'ny farany" manokana isika ary tsy hanahy ny amin'ny "fotoana farany".
Fa ny manahy ny amin'ny "andro farany" dia hafa be noho ny tena fanaovana izay nandidian'i Jesosy antsika: "miambena sy mivavaha".(2) Satria na dia tsy fantatsika aza ny andro na ny ora fiverenany farany amin'ny faran'ny fotoana dia isika afaka, dia, ary tokony fantaro ny "famantarana" fivadiham-pinoana lehibe, ny maha-akaiky ny Antikristy, fanenjehana, sns.
Momba ny fotoana sy ny fotoana, ry rahalahiko, dia tsy misy tokony hosoratanao aminareo. Fa fantatrareo tsara fa ho avy toy ny mpangalatra amin'ny alina ny andron'ny Tompo. Raha miteny ny olona hoe: «Fiadanana sy filaminana», dia tonga tampoka aminy ny loza, toy ny fanaintainan'ny vehivavy bevohoka, ka tsy ho afa-mandositra izy ireo. Fa ianareo, ry rahalahy, tsy ao amin'ny maizina, mba hahatratra anareo toy ny mpangalatra izany andro izany. Fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro. (1 Tes 5: 1-5)
Izany dia nilaza fa raha ny fihetsika ataontsika dia ny miezaka ny "mandositra" amin'izao tontolo izao sy miafina, dia hadinontsika ny iraka nampanaovina antsika (jereo Filazantsara ho an'ny rehetra).
Tsy misy mandrehitra jiro manafina azy na mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fitoeran-jiro mba ho hitan'izay miditra ny mazava…. Koa mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy amin'ny Zanaka ary amin'ny Fanahy Masina… (Lioka 11:33, Matio 28:19).
Koa andeha isika handeha amin'ny fahazavan'ny fahamarinana, fahendrena, fahiratan-tsaina ary fahaiza-manavaka… fa tsy faneriterena tahotra sy fitehirizana tena na fanamoriana sy fanetren-tena izay matetika no arahabain'ny faminaniana. Fahatafintohinana amin'Andriamanitra izany — tsy miresaka amintsika Izy na mandefa ny Reniny mba tsy hiraharaha antsika na haneso azy.
Mamporisika anao izahay hihaino amin'ny fo tsotra sy fahatsoram-po amin'ny fampitandremana feno fanaon'ny Renin'Andriamanitra… Ny Romanina Pontiff ... Raha miorina amin'izy ireo ny mpiambina sy mpandika ny Fanambarana masina, izay hita ao amin'ny Soratra Masina sy ny hadita, dia raisin'izy ireo koa izany. amin'ny maha adidiny azy ireo ny manolotra ny sain'ny mpino - rehefa avy nandinika izany izy ireo dia mitsara azy ireo ho amin'ny tombotsoan'ny besinimaro - ireo jiro mihoatra ny natoraly izay sitrak'Andriamanitra hanome maimaimpoana amin'ireo fanahy manana tombontsoa sasany, tsy amin'ny fanolorana fotopampianarana vaovao, fa tariho amin'ny fitondran-tenanay izahay. —POPE ST. JOHN XXIII, Hafatry ny Papa Papal, 18 feb 1959; L'Osservatore Romano
Izay rehetra nilaza, tao dia ny olona sasany izay nantsoina ary mino marina fa ny fananany na ny tranony dia hialokaloka indray andro any hiaro ny olon'Andriamanitra. Ny tiako holazaina dia hoe: raha hisy ny mpitsoa-ponenana dia ho tonga izany any ho any. Tsy mitsara azy ireo aho, na dia mamporisika azy ireo aza aho mba hitandrina sy hitandrina ary hametraka ny tenany, raha azo atao, eo ambany fitarihana ara-panahy tsara.
Mikasika ny fitahirizana sakafo, eny, nisy hafatra sasany izay nanentana izany. Vao tsy ela akory izay, hoy ny Tompovavintsika	Gisella Cardia	ny 18 aogositra 2020:
Ry zanaka malala, misaotra anao nihaino ny antsoko tao am-ponao. Mangataka anao aho mba tsy hanary vavaka mihitsy: io ihany no fitaovam-piadiana hiaro anao. Mifandona ny fiangonana: Eveka manohitra ny eveka, kardinaly manohitra kardinaly. Mivavaha ho an'i Amerika satria hisy fifandonana lehibe amin'i Shina. Anaka, mangataka aminareo aho mba hanao tahirin-tsakafo mandritra ny telo volana farafaharatsiny. Efa nolazaiko taminao fa ny fahalalahana nomena anao dia ho nofinofy - hoterena ianao hipetraka ao an-tranonao indray, saingy amin'ity indray mitoraka ity dia hiharatsy kokoa satria akaiky ny ady an-trano…
Fr. Michel Rodrigue	dia nilaza hoe "telo volana" koa, raha nilaza kosa i Jesosy fa	Jennifer	:
Anaka, fotoana fanomanana be izao. Tsy tokony hiomana amin'ny fanadiovana ny fanahinao fotsiny ianao, fa amin'ny fametrahana an-tsokosoko ihany koa ny sakafo sy ny rano, ary hitarika anao any amin'ny toeram-pialofanao ireo anjeliko. Anaka, maro ny handà fa hisy ny fampitandremana. Betsaka no haneso anao noho ny fahavononanao hanaraka ny fombako fa tsy ny fanaon'izao tontolo izao. Ireo no fanahy, Anaka, izay mila vavaka indrindra. Ireo no fanahy izay tokony hanaiky hijaly ho anao. — 2Jolay 2003; wordsfromjesus.com
Mpanome namana mpiara-miasa eto sy teolojiana, Peter Bannister, nanamarika hoe:
… Raha ny hevitra momba ny fitahirizana sakafo ho fanomanana fotoan-tsarotra dia tsy tian'ny sasany, avy eo ao amin'ny bokin'ny Genesis dia ahitantsika ny fomba namonjen'i Josefa ny firenena Egypte - ary nampifanarahina tamin'ny fianakaviany izy - tamin'ny fanaovana izany. Fanomezana ara-paminaniana nomena azy io, ahafahany mandika ny nofin'i Faraona ombivavy fito tsara sy omby mahia mahia fito izay maminavina mosary any Egypta, izay mitarika azy hanangona varimbazaha “be dia be” (Gen. 41:49) manerana ny firenena. Io ahiahy momba ny famatsiana ara-pitaovana io dia tsy voafetra ho an'ny Testamenta Taloha ihany; ao amin'ny Asan'ny Apôstôly dia misy faminaniana toy izany koa momba ny mosary any amin'ny fanjakan'ny Romana nomen'ny mpaminany Agabo, izay novalian'ny mpianatra tamin'ny fanomezana fanampiana ireo mpino tany Jodia. (Asa 11: 27-30). -Fizarana 2 amin'ny valiny ho an'i Fr. Ny lahatsoratr'i Joseph Iannuzzi momba ny Fr. Michel Rodrigue – Eo amin'ireo mpitsoa-ponenana
Ny lanitra dia tsy mampiroborobo toe-tsaina tafavoaka velona fa iray amin'ny fahamalinana tsotra. Jereo izay nitranga taorian'ny "onja voalohany" an'ny COVID-19: tsy nahita masirasira, koba, taratasy fidiovana sns ny olona ary na dia ankehitriny aza dia maro ireo fivarotana sy mpamatsy milaza fa mbola tsy afaka mitahiry tsara ny talantalana raha mbola mihidy ny orinasa ary manakaiky ny tatitra ny tsy fahampian'ny sakafo. Hendry fotsiny ny miomana amin'izay efa miharihary amin'ny lohateny. Miomàna, eny. Horohoro? Tsia, tsia. Ka raha tsy manana toerana itahirizana sakafo mandritra ny herinandro fotsiny ianao, dia izany no izy. Dia hoy ianao tamin'i Jesosy: “Tompoko, ireto ny mofo dimy sy hazandrano roa. Fantatro fa azonao ampitomboina izy ireo, raha ilaina izany na amin'ny fotoana ahoana. Ho ahy kosa, mametraka ny fanantenako sy matoky anao rehetra aho. ”(3)
Momba ny “fampitandremana”
Momba ny "Illumination of Conshiensia" na Fampitandremana ho avy nantsoina na notononin'ireo lazaina ho mpahita avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ao anatin'izany ireo ao Garabandal, Fr. Stefano Gobbi, Jennifer, Fr. Michel, Gisella Cardia, Luz de Maria, Vassula Ryden, Mpanompon'Andriamanitra Maria Esperanza, St. Faustina, sns ary toa nambara mialoha ao amin'ny Apôk. 6: 12-17 (jereo Ny Andro lehiben'ny fikorontananat)… Tsy misy tokony hatahorana an'ity hetsika ity koa—if ao anatin'ny "toetran'ny fahasoavana" ianao.
Amin'ny fitiavany masina, dia hanokatra ny varavaran'ny fo Izy ka hanazava ny feon'ny fieritreretana rehetra. Ny olona tsirairay dia hahita ny tenany ao anaty afo mirehitry ny fahamarinana masina. Ho toy ny fitsarana amin'ny kely indrindra izy io. Ary avy eo i Jesosy Kristy dia hitondra ny fanapahany be voninahitra eto amin'izao tontolo izao. —Ny vadintsika ho an'i Fr. Stefano Gobbi, Ho an'ireo pretra, Zanakalahin'ny malalantsika, 22 Mey 1988
Ilaina ny mahatakatra ny vahoakan'ny Mpanjakantsika sy Jesosy Kristy Tompontsika fa fotoana fidinana io… Miambena hatrany, ny sorona ankasitrahan'Andriamanitra no maharary indrindra. Ao amin'ny fampitandremana dia hahita ny tenanao ianao, noho izany tsy tokony hiandry ianao, miova fo izao! Avy amin'izao tontolo izao dia misy fandrahonana lehibe tsy ampoizina ho an'ny zanak'olombelona: tsy maintsy ilaina ny finoana. -St. Michael the Archangel to Luz de María, 30 aprily 2019
Maizina ny lanitra ary toa ny alina ihany nefa ny foko no milaza amiko izany indraindray amin'ny tolakandro. Hitako ny fisokafan'ny lanitra ary maheno henoko aho ary tarihin'ny kotroka. Rehefa mibanjina aho dia mahita an'i Jesosy mihoson-doha eo amin'ny hazo fijaliana ary mandohalika ny olona. Dia hoy i Jesosy tamiko: "Ho hitan'izy ireo ny fanahiny raha ny fahitako azy." Hitako mazava tsara ny ratra amin'i Jesosy sy i Jesosy avy eo, "Izy ireo dia hahita ny ratra tsirairay izay nampian'izy ireo tao amin'ny foko masiko indrindra." -cf. Jennifer - Fahitana amin'ny fampitandremana
Eny, ny mpahita sasany dia nilaza fa ireo izay lavitra an'Andriamanitra dia mety ho faty amin'ny tahotra mahita ny toe-panahin'ny fanahiny. Ny sasany kosa hitomany amin'ny alahelo lalina raha ny hafa kosa hahita fampiononana sy fampaherezana lehibe amin'ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Fa maninona, hoy ny fanontanian'ny pretra iray, no hanomezan'Andriamanitra fanitsiana toy izao amin'izao fotoana izao? Ny valiny dia satria, tsy nanomboka tamin'ny Safo-drano, dia efa niomana hanadio ny tany indray Andriamanitra. Ny Fampitandremana dia izany indrindra - "antso farany" ho an'izany taranaka izany hiverina any an-tranon'ny Ray. Araka ny nolazain'i Jesosy tamin'ny Mpanompon'Andriamanitra Luisa Piccarreta:
… Ilaina ny famaizana; izany dia hanamboatra ny tany mba hisian'ny Fanjakan'ny Fiat Faratampony [ny sitrapon'Andriamanitra] eo afovoan'ny zanak'olombelona. Noho izany, fiainana maro, izay ho sakana amin'ny fandresen'ny fanjakako, no hanjavona tsy ho eto an-tany… —Diary, 12 septambra 1926; Ny satrobonin'ny fahamasinana amin'ny fanambarana an'i Jesosy mankany Luisa Piccarreta, Daniel O'Connor, p. 459
Fa raha matahotra ianao satria tsapanao fa mpanota lehibe ianao dia manaova zavatra amin'izany! Mila mijanona tsy himenomenona momba ny mahatsiravina isika ary manolotra ny tenantsika ho eo an-tànan'i Jesosy be fitiavana.
Aza variana amin'ny fahorianao - mbola malemy loatra ianao ka tsy afaka miresaka momba izany - fa kosa, mibanjina ny Foko feno fahatsarana, ary miondrika amin'ny fihetseham-poko. —Jesosy hatrany Saint Faustina, Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 1486
Ary eto indray, dia eto no tokony ahitan'ny fanambarana manokana ny valiny ao amin'ny fanambarana ampahibemaso an'i Kristy. Ny zavatra tena ilainao amin'ny famonjena anao dia hita ao amin'ny Sakramenta sy Lovam-panahy Masina. izany dia tsy maintsy manjary lasa sakafonao isan'andro, raha azo lazaina. Ka ny fomba tsara indrindra "hibanjinana" ny Fon'i Jesosy dia ny fampidobohana ny famindram-pony amin'ny confession. Mandehana isan-kerinandro raha tsy maintsy atao, fa mandehana (fo amin'ny fo feno fo hatrany no hiova fo).
Ny fanahy dia toy ny faty simba ka raha ny fijerin'olombelona dia tsy hisy [fanantenana ny] famerenana amin'ny laoniny ary efa ho very ny zava-drehetra, tsy izany no Andriamanitra. Ny fahagagana avy amin'ny Famindram-po avy amin'Andriamanitra [amin'ny fiaiken-keloka] mamerina amin'ny laoniny tanteraka izany fanahy izany. Endrey, mampalahelo tokoa ireo izay tsy manararaotra ny fahagagan'ny famindram-pon'Andriamanitra! -Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 1448
"… Ireo izay mandeha amin'ny fiaiken-keloka matetika ary manao izany amin'ny faniriana handroso" dia hahatsikaritra ny dingana vitany amin'ny fiainany ara-panahy. "Mety ho eritreritra fotsiny ny hikatsaka ny fahamasinana, araka ny fiantsoana izay noraisin'Andriamanitra, nefa tsy mandray matetika ity sakramenta fiovam-po sy fampihavanana ity." —POPE JOHN PAUL II, kaonferansa fivarotan-tenan'ny Apôstôly 27 martsa 2004; catholicculture.org
Manomboka amin'ny tahotra ka hatramin'ny finoana
Eto am-pamaranana, ry rahalahiko sy ranabavy malala, mety hanampy ny sasany aminareo ny hahafantatra fa mitsikera kokoa aho ary tsy mino ny fanambarana manokana, tafiditra ao amiko, fa tsy hieritreritra ny olona. Izaho dia mpanao gazety vaovao rahateo. Ny fisalasalana dia ampahany amin'ny asa fotsiny. Raha mbola mihaino ireo mpahita sy mpaminany rehetra eto aho, dia mitazona ireo teny ireo hoe “malalaka”. Izaho dia mitazona izay tsara, indrindra ireo teny fitiavana sy fankaherezana ilaintsika rehetra amin'izao andro izao. Mikasika ireo pitsopitsony kosa, miandry isika dia mahita fa “miambina sy mivavaka” isika.
Mandritra izany fotoana izany dia mifikira amin'i Jesosy Kristy amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny Mass matetika araka izay azonao atao, fandehanana tsy tapaka amin'ny confession, famakiana ny soratra masina, fivavahana amin'ny rosary ary fandaniana fotoana irery miaraka amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny vavaka. Amin'izany fomba izany, ny tahotra dia hamela ny finoana satria Andriamanitra, izay Fitiavana Lavorary, dia handroaka ny tahotra ao am-pon'ny olona horaisiny.
Tsy misy tahotra amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka mandroaka ny tahotra. (1 John 4: 18)
Raha sahirana ianao manolotra ny tahotra sy ny fanahiana amin'ny Tompo (aza matahotra, tsy irery ianao!), Dia mamporisika anao aho hivavaka ilay tsara tarehy Novena of Abandonment na ny Litany of Trust eto ambany. Rehefa dinihina tokoa, rehefa avy nanome diary fanambarana ho an'i St. Faustina izay nolazain'i Jesosy fa hiomana amin'ny "fiaviany farany"(4) Nandao antsika tokoa izy dimy teny miantehitra amin'ireto fotoana ireto: Jesosy matoky anao aho.
Ary ampy izay, satria ny finoana dia afaka mamindra tendrombohitra.
LITANY an'ny fitokisana
Avy amin'ny finoana fa tsy maintsy mahazo ny fitiavanao aho
Afaho aho, Jesosy.
Noho ny tahotra hoe tsy tiako aho
Avy amin'ny fiarovana diso izay ananako
Noho ny tahotra ny hametrahako fatokisana ahy kokoa noho ny fahatokisanao anao
Avy amin'ny ahiahy rehetra amin'ny teninao sy fampanantenanao
Avy amin'ny fikomiana amin'ny fiankinan-doha amin'ny zaza toa anao
Avy amin'ny fandavana sy ny fisalasalana amin'ny fanekena ny sitrakao
Avy amin'ny fanahiana momba ny ho avy
Avy amin'ny lolom-po na be atao amin'ny lasa
Avy amin'ny fitadiavana tena tsy milamina amin'izao fotoana izao
Avy amin'ny tsy finoana ny fitiavanao sy ny fanatrehanao
Avy amin'ny tahotra angatahina hanome mihoatra noho izay ananako
Avy amin'ny finoana fa tsy misy dikany na sarobidy ny fiainako
Afaho aho, Jesus.
Avy amin'ny tahotra izay takian'ny fitiavana
Avy amin'ny famoizam-po
Mihazona ahy foana ianao, manohana ahy, tia ahy
Jesosy matoky anao aho.
Ny fitiavanao mandeha lalindalina kokoa noho ny fahotako sy ny tsy fahombiazako ary manova ahy
Izay tsy fahalalana izay entin'ny ampitso dia fanasana hiantehitra Aminao
Miaraka amiko amin'ny fahoriako ianao
Ny fijaliako, tafakambana amin'ny anao, dia hamoa amin'ity fiainana ity sy amin'ny ho avy
Ny tsy hamelanao ahy kamboty, fa eo amin'ny fiangonanao ianao
Ny drafitrao dia tsara noho ny zavatra hafa rehetra
Izay henonao foana aho ary amin'ny hatsaranao dia valio foana aho
Manome ahy fahasoavana ianao hanaiky famelan-keloka sy hamela ny heloky ny hafa
Manome ahy ny tanjaka rehetra ilaiko amin'izay angatahina amiko ianao
Ny fiainako dia fanomezana Jesosy, matoky anao aho. Ampianarinao hatoky anao aho
Ianao no Tompoko sy Andriamanitro
Io no malalako
avy amin'i Sr. Faustina Maria Pia, SV
SISTERS an'ny fiainana
38 Montebello Road Suffern, NY 10901
1 Cor 12: 27-31[↩]
Matt 26: 41[↩]
cf. Lioka 12: 22-34[↩]
Famindrampon'Andriamanitra ao amin'ny fanahiko, Diary, n. 429[↩]
Posted in Avy amin'ny mpamatsy vola anay.
← Filazantsara ho an'ny rehetra
Pedro - Na inona na inona mitranga →